အိတ်ဆောင် USB Style Rechargeable Bicycle LED Taillight - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
အိတ်ဆောင် USB Style Rechargeable Bicycle LED Taillight
အရောင် USB အနီရောင်အပြာ USB-အပြာရောင် USB - အနီဖြူ USB အနီရောင် USB-white USB ရောင်စုံ ဘက်ထရီ - နီ
USB အနီရောင်အပြာ USB-အပြာရောင် USB - အနီဖြူ USB အနီရောင် USB-white USB ရောင်စုံ ဘက်ထရီ - နီ
အိတ်ဆောင် USB Style အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်စက်ဘီး LED Taillight - USB-red blue backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
လက်မှတ်: CE, RoHS
mounting နေရာထားရှိ: ဘောင်
မော်ဒယ်အမည်: စက်ဘီး Taillight LED
အလင်းကိုအရောင်: အနီရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အပြာရောင်
Flash Mode အသစ်
Flash Modes အမျိုးအစား ၄ မျိုး၊ ချောချောမွေ့မွေ့ဒီဇိုင်း၊ ရေစိုခံတံဆိပ်၊ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်၊ စက်ဘီးအားလုံးနှင့်သင့်တော်သည်။
USB အားသွင်းဖွဲ့စည်းမှုမီးလုံးစုံ -5LED
မုဒ်:4သည် Modes
အမြဲတမ်းအလင်း -4နာရီ
Strobe: 8 နာရီ
နှေး: 10 နာရီ
အစာရှောင်ခြင်း - 12 နာရီ
Approx2 နာရီ: အချိန်အားသွင်း
USB ပုံစံအထုပ်: 1 ရော်ဘာများဖြင့် 1 စက်ဘီးအလင်း၊2USB
USB ပုံစံအထုပ်မရှိပါ 1 စက်ဘီးများဖြင့်စက်ဘီးအလင်း
Safety သတိပေးချက် Taillight: စက်ဘီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုသတိပေးမီးအဖြစ်၎င်းသည်တောက်ပ။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
USB အားပြန်သွင်းနိုင်ပြီးသင်၏ငွေကိုသိမ်းဆည်းပါ။ အပတ်တိုင်းဘက်ထရီများနေရာတွင်အစားထိုးပါ။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ (သို့) USB port တခုခုကနေအားသွင်းတယ်။
အလွယ်တကူထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန် - ကိရိယာတန်ဆာပလာထဲ၌သင်၏ဝက်အူလှည့်ကိရိယာများကိုထားခဲ့ပြီး NO tool များမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ရေစိုခံနိုင်ပြီးထိတွေ့မှုဒဏ်: IPX4 ရေစိုခံအဆင့်
1 x ကိုအလင်း
Cable ကိုအားသွင်း 1 x ကို USB မှတ်
2 x ကိုရော်ဘာသိုင်းကြိုး
ဘက်ထရီစတိုင်လ်၊ USB မရှိပါ
ဘက်ထရီအမျိုးအစား:2* AG10 ဘက်ထရီများ (ပါဝင်သည်)
အလုပ်ချိန် - 50 နာရီကျော်
Support မှိန်ခြင်း:3မုဒ်များ (ပုံမှန် - မြန်မြန် - နှေးနှေးမီး)
1 * LED စက်ဘီးအလင်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 24 ၏နေ့ရက်တွေအတွက်ပျော်စရာကောင်းသည်။ အရောင်တောက်ပသည်၊ приготовится, сейчасранотемнеет.Рекомендуюкпокупке! Продавцуспасибо!
Отличныефонарики зарядкудержатнормально။ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။
comprei 3, chegou dentro လုပ်ပါ prazo ။ ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကြာရှည်စေတယ်။
4 режимасвечения, полчасазаряжается